အလိုအလျောက် stacking နှင့် Bundling စက်
အလိုအလျောက်ထုပ်ပိုးစက်ကိုသံမဏိပိုက်များကို ၆ သို့မဟုတ် ၄ ထောင့်သို့စုပုံရန်၊ သိုလှောင်ရန်နှင့်အလိုအလျောက်စုစည်းရန်အသုံးပြုသည်။ manual လည်ပတ်မှုမရှိဘဲတည်ငြိမ်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ဤအတောအတွင်းသံမဏိပိုက်များ၏ဆူညံသံနှင့်ခေါက်ဖယ်ရှားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုပ်ပိုးခြင်းလိုင်းသည်သင်၏ပိုက်အရည်အသွေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေပြီးကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးအန္တရာယ်ရှိသောဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။
အလိုအလျောက် stacking နှင့်ထုပ်ပိုး။
3.Less labors, နိမ့်အလုပ်လုပ်အစွမ်းသတ္တိ။
4. အော်တိုစစ်ဆင်ရေး, နိမ့်ဆူညံ။
2.Pipe ရေတွက်ခြင်းနှင့် stack
ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားအစုအဝေးအတွက်ပိုက်ဘယ်နှစ်လုံးလိုအပ်မည်၊ စနစ်သည်ပိုက်များကိုအလွှာအလွှာအလွှာအလိုက်စုဆောင်း။ ပိုက်အလုံအလောက်ရှိသည့်ပိုက်များကိုစုဆောင်းသည်အထိပိုက်လိုင်းအလွှာမည်မျှလိုအပ်လိမ့်မည်ကိုသတ်မှတ်ထားသည့်အစီအစဉ်တွင်စနစ်ရှိသည်။ ပိုက်တစ်ခု၏အလွှာကိုကောက်ယူစုဆောင်းသည့်ကိရိယာသို့တွန်းထုတ်သည့်အခါအလွှာတစ်ခု၏အမြင့်ကိုနှိမ့်ချပါ။
4. အလိုအလျောက် bundle ကို device ကို
ချိတ်ဆွဲထားသည့်အလိုအလျောက် bundle စက်သည် set bundling belt belt ၏လိုအပ်သောအဆင့်များအတိုင်းအဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ တိုးတက်မှုမှာ - bundling machine သည် bundling အနေအထားသို့ရွေ့သွားပြီးအပေါ်ဆုံးအလွှာနှင့်ဆက်သွယ်လိမ့်မည်။ Belt circuit သည်ပိတ်လိမ့်မည်။ bundle head သည်ခါးပတ်ကိုလွှတ်လိုက်လိမ့်မည်။ ခါးပတ်၏အဆုံးကိုဆက်သွယ်ပေးလိမ့်မည်။ ထို့နောက်ခါးပတ်ကိုဖြတ်; ထို့နောက်ခါးပတ်လမ်းညွှန်လမ်းကြောင်းပွင့်လာလိမ့်မည်။
စက်ဘီးစီးခြင်း - လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ PLC မှအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်လိမ့်မည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်မှုကိုအာမခံနိုင်စေရန် manual နှင့် automatic control ၏လုပ်ဆောင်ချက်လည်းရှိသည်။
ရှေ့သို့ ERW 219mm Tube စက်
နောက်တစ်ခု: ERW 32mm Tube စက်
အလိုအလျောက် Tube ထုပ်ပိုးစက်